Balotelli oo isagoo xor ah xilli ciyaareedka dambe la gor gortami doona kooxaha Ingiriiska – Gool FM
Balotelli oo isagoo xor ah xilli ciyaareedka dambe la gor gortami doona kooxaha Ingiriiska
Haaruun September 19, 2016
(Nice), 19 Sebt 2016 –Wakiilka laacibka kooxda Nice ee Faransiiska Mario Balotelli ayaa sheegay in Mario uu si fiican ula qabsaday kooxdiisa cusub, isla markaana uu dib ugu soo laaban doono Horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedka dambe.
Wakiilka Super Mario, Mino Raiola oo wareysi siinayay maanta Wargeyska ‘Daily Mail’ ayaa sheegay in tababareyaasha Premier League ay aad u xiiseyn doonaan Balotelli marka uu dhameysto sanadkan amaahda ah ee uu ugu ciyaarayo kooxda Nice.
“Xilli ciyaareedka dambe waxa uu noqon doonaa mid xor ah, haddii uu si fiican ula qabsado Nice, goolal fara badanna u dhaliyo bal qiyaasa sida ay u daneyn doonaan tababareyaasha Premier League Ingiriiska” ayuu yiri Raiola.
“Cidina ma oran karto Balotelli ma ahan laacib caalami ah” ayuu sii raaciyay Wakiilku.
Mario ayaa kulankiisii ugu horreeyay ee uu u ciyaaray Nice Axaddii la soo dhaafay waxa uu u dhaliyay laba gool oo xiriir ah, taasoo muujisay inuu ka soo kabanayo doorashadii uu ku tilmaamay tiisii ugu xumayd taariikhdiisa ciyaaryahan ee ahayd inuu ku biiray Liverpool.
Da'yarkii hore ee ugu qaalisanaa dunida Javier Saviola oo loo magacaabay Tababare ku xigeen
Jaceylka Walaaltinimo: Orodyahan Walaalkiis oo sii dhacaya garab qabtay una qal qaaliyay kaalinta 2-aad